Ukusela Ngeendiza, ngefoyile ye-aluminiyam Paper, Tape Krazula, yokuGqithisela Paperboard - Fancyco
Pla luhlobo bapakishe izinto ukusuka kwisityalo. ukhuseleko layo ukutya ngaphezulu iplastiki yemveli. iiplastiki eziqhelekileyo ngokusebenzisa ukusebenza kwenziwa xa yokusebenza iimveliso, 100% ezinokuboliswa ziintsholongwane nokulahla. Nokuba isetyenziselwa extrusion yokubumba ezikhule umboniso, polylactic acid intlaka ephelele. Oku nje utshintsho eziphathekayo, kwakhona ukunika abasebenzisi amava olungcono kwemveliso, hayi nje kuphela kweli kwinkqubo machining for ezikhutshwayo eliphantsi. Emva kokuba ishiywe ngaxeshanye, kwakhona ayiqwalasele ukukhusela okusingqongileyo.
Icuba materials yokugoqa
Thina uluhlu olupheleleyo amava ukuthunyelwa izinto ekrwada ugwayi, kuquka iphepha-aluminiyam eneli, yeflakisi acetate, BOPP umboniso, Plug ngokuyambathisa iphepha ngenxa intonga filter, iphepha umdiza ukurhangqa, ibhodi isakhelo Lwangaphakathi zokutshaya nokupakisha, iteyiphu Krazula, kwaye isipho iphepha.
Ingxaki ngeplastiki: 1.6 izitro umntu ngamnye dayAmericans ngamnye asebenzise ngokwaneleyo ukuba azisongele emhlabeni wonke amaxesha 2.5 ngonaphakade ngemini. Uninzi lwabo iiplastiki straws.Ecosystem PollutionBecause kwaye ayisindi kunjalo, imicinga wavuthela iindlela yamanzi, apho intloko ke waya elwandle, akuphathe kakubi wildlife.Not enokurisayikilisheka Non-biodegradablePlastic imicinga engenakuphinde isetyenziswe. Abayi cazulula bangalihlambeli ilizwe lethu kunye oceans.It yethu IXESHA Eco! Siye ezikhethekileyo diposables ezivuthuluka, kuquka tablewares iswekile bagasse, izikhongozeli ukutya wheet umququ ezifana indebe, unefoni, isitya, yetreyi, ipleyiti njalo njalo kunye nezinye izinto ezilahlwayo ezisetyenziswa zokutyela, iipiknik kunye namaqela.
Fancyco wafunyanwa ngo-2004 inkampani yethu waba umthengisi yegolide Alibaba kwiminyaka 14. Yaba zaguquka ingongoma ebalulekileyo ngo-2005 apho thina mveliso yethu. Ngowe-2015 Fancyco wangena ngempumelelo Nigeria kunye Uganda zeemarike kumisa No.1 uphawu lephepha nococeko iimveliso istikha kula mazwe. Ngoku ke ezikhethekileyo zopakisho bokuprinta izinto.